Scrubber (1) Factory - China Scrubber (1) Mpanamboatra, mpamatsy
Ny mpanadio escalator tariby sy bateria- SC-450 / D
Manasongadina ny famolavolana kodiarana tsy manam-paharoa, mety kokoa ny mandeha. Afaka manangana ny kitapo vovoka ao anatiny, mora sy madio. Ampifanaraho ho azy ny haavon'ny roller, ny fahombiazan'ny fanadiovana avo lenta! Item ara-teknika SC450 SC450D TOSIKARAT 220-240V / 50Hz 40V Herinaratra 1180W 580W Haavo miasa 450mm 450mm Motera maina 220V / 1000W 500W Roll motera borosy 24V / 180W 24V / 180W Haingam-pandeha borosy 230RPM 230RPM Fahafahana 20L 5L Tariby 12m - Lanja 38kg 64.5kg Mavesatra lehibe 40.2kg 66kg fonosana 950x540x31 ...
Ride-on scrubber drier dia milina fanadiovan-tany tsara indrindra tsy maintsy ilaina, izay misy fiasa miovaova, famolavolana borosy roa tonta ary fahombiazan'ny fanadiovana avo lenta. Izy io dia mihatra amin'ny tranokalan'ny tanàna, kianja, tsena lehibe, ozinina, atrikasa ary toerana maro ho an'ny daholobe.
Ity vokatra ity dia milina elektrika manadio tena ilaina amin'ny fanadiovana ny tany. Mora ny mitondra fiara, malefaka miasa, volavolan'ny borosy tokana sy avo roa heny, fahombiazan'ny fanadiovana avo lenta, motera moka mahery vaika hantsaka ny maloto miaraka aminy.
Izy io dia mety amin'ny tranokala fanorenana monisipaly, kianja lehibe, fivarotana lehibe, atrikasa famokarana sns.
Walk-Behind Scrubber Drier miaraka amin'ny bateria -H8101 / H8102
Ny fizotry ny fampiasana scrubber drier dia tsotra tsy mampino. Ny mpanamory lamba dia mampiasa fitaovana fanosotra eo aloha mba hanomezana madio ny gorodonao amin'ny alàlan'ny rano sy simika. Ny rano maloto sisa tavela avy eo dia angonina amin'ny fivezivezivezena iray avy amin'ny fitaovana fanamainana any aoriana, izay matetika dia misy fitambaran-tsiranoka sy fofona mifoka izay mampiditra grime sy tsiranoka be loatra ao anaty fitoeran-kaontenera.
Fahombiazana avo lenta sy madio, hihaonana amin'ny filan'ny tontolo iainana. Na inona na inona trano fisakafoanana, hotely, trano fisakafoanana, efitrano fisotroana kafe, sinema, Leisure Center, gym, tranon'ny birao. Ny tontolo tery sy elanelana madinidinika toy izany dia afaka mampiasa malalaka, raha manadio ny fahavitan'ny fanodinana maloto mandeha ho azy, hahatratra ny vokatra tena madio.